2015 ဖြင့် ဇာတ်ကား72 ကား
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကြာက ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများ မထွန်းကားချိန်အခါတုန်းက ဘီလာနဲ့ဂူဖိုးယားတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာ ရွာလေးတစ်ရွာမှာ သူတို့အမေနဲ့အတူ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေနေခဲ့ကြတယ် ဘီလာဟာငယ်ငယ်လေးထဲက မြင့်မြတ်တဲ့စစ်သည်တော်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပါ ခေတ်အခါကလဲ မှောင်ခေတ်ကလဲ မှောင်ခေတ်လို့ပြောရလောက်အောင် သက်ဦးဆံပိုင်ကျွန်ခေတ်ဖြစ်နေတော့ တစ်ရက်မှာ သူတို့ရွာလေးကို အင်အားကြီးနယ်မြေက သိမ်းသွားပြီး သူတို့အမေလဲသေ သူတို့ကိုလဲ ကျွန်အဖြစ်နဲ့ဖမ်းသွားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘီလာတို့မောင်နှနှစ်ယောက် ကျွန်အဖြစ်နဲ့နေလာရင်း ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီး စီးပွားရှာနေတဲ့သူဌေးကြီးရဲ့ အစေခံမဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ် ဒီလိုနဲ့ပါ နှစ်တွေကြာလာတဲ့အချိန်မှာ ဘာသာရေးရဲ့အနှစ်သာရကို တကယ်သိရှိတဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီး ဘီလာတစ်ယောက် မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးပြီး လွတ်လပ်ပြီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိဖို့အတွက် ကြိုးစားလာပါတော့တယ် ဒီအချိန်မှာ ဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်အမြတ်ထုတ်နေသူတွေနဲ့ ယုံကြည်သူတွေကြားထဲ ဘယ်လိုအားပြိုင်မှုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားကိုသာဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါ ပြီးတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်… Rating 8.5 ရရှိထားတဲ့ ဒီကားလေးဟာ ကြည့်တဲ့လူတွေအဖို့ အတိုင်းတာတစ်ခုထိကျေနပ်စေမှာပါ….
ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့ – Edith Cushing (Wasikowska) ကစာရေးဆရာမလေးဖြစ်ပြီး အတိတ်က သူ့မိဘတွေရဲ့ ကြေကွဲစရာဇာတ်သိမ်းကို မေ့ပျောက်ဖို့ကြိုးစားနေရသူ။ သူ့ရဲ့အသစ်စက်စက်ခင်ပွန်း Thomas Sharpe (Hiddleston) ကခန့်ညားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပေမယ့် လျှို့ဝှက်တတ်ပြီး လူတွေနဲ့ခပ်ကင်းကင်းနေတတ်သူတစ်ဦးပါ။ သူ့ခင်ပွန်းရဲ့အစ်မ Lucille Sharpe (Chastain) ကလည်းသူ့ကိုသိပ်မကြိုဆိုပြန်ဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူ့ရဲ့ငယ်ရည်းစား Alan McMichael (Hunnum) ကိုလည်းစိတ်ထဲကမပြတ်မသားဖြစ်နေမိပြန်တယ်။ Edith ဟာသူ့ခင်ပွန်းရဲ့ခန်းနားတဲ့အိမ်ကြီးမှာနေထိုင်ရင်း အဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အတိတ်ကို တဖြည်းဖြည်းတူးဆွဖော်ထုတ်လာမိတဲ့အခါမှာတော့…..။ မက္ကဆီကန်ဒါရိုက်တာ Del Toro ရဲ့ပြောစကားအရတော့ R အဆင့်တောင်သတ်မှတ်ခံရနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဆိုပဲ။ သူဇာတ်ညွှန်းရေး သူဒါရိုက်တာလုပ်ရိုက်တဲ့ကားတွေထဲမှာ Hell Boy I, II လောက်ကိုပဲသဘောကျတယ်။ Pan’s Labyrinth ရဲ့ဇာတ်လမ်းကသိပ်မဆိုးပေမယ့် Pacific Rim ကိုတော့မကြိုက်ဘူး။ ကျနော်ကပဲ Alien theme တွေမကြိုက်လို့လားတော့မသိဘူး။ The Hobbit Trilogy ကိုဇာတ်ညွှန်းရေးပေးခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကိုဇာတ်ညွှန်းအရေးကောင်းသူလို့ပဲ မြင်မိတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကလည်းသိပ်မဆိုးလောက်ပါဘူး၊ teaser နဲ့တင်တော်တော်ကြည့်ချင်စရာကောင်းနေပြီ။ တစ်ခုပဲ.. သူဇာတ်ညွှန်း၊ သူဒါရိုက်တာဆိုတော့ သွေးသံရဲရဲနဲ့ရွံစရာ animation ကြီးတွေမပါပါစေနဲ့ပဲဆုတောင်းရမယ်။ ဇာတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ Edith Cushing ရဲ့နေရာမှာ အရင်က Emma Stone ကိုလျာထားပြီး နောက်မှ Wasikowska နဲ့ပြောင်းလိုက်တာပါတဲ့။ Wasikowska ကပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ထင်တယ်။ Stoker ထဲကအေးတိအေးစက်ကောင်မလေးပုံစံကို ထပ်မြင်ချင်သေးတာကိုး။ Thomas Sharpe ရဲ့နေရာမှာလည်း အရင်က Benedict Cumberbatch ကိုရွေးထားပြီးမှ Hiddleston နဲ့လဲလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ ၂ယောက်စလုံးက အေးစက်စက်မျက်နှာတွေနဲ့ဆိုတော့ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ဇာတ်လမ်းနဲ့လိုက်ဖက်မှာပါပဲ။ ပြီးတော့ Hiddleston ကအပြင်မှာလည်း သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ Cumberbatch ကို ဒီရုပ်ရှင်အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါလို့ပြောသေးတယ်ဆိုပဲ (yeah, bromance!)။ ဘာပဲပြောပြော ဒါရိုက်တာကောင်း သရုပ်ဆောင်ကောင်းတွေနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီကားက စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ကားပါ။ YouTube teaser ထဲကနောက်ခံသီချင်း Red Right Hand ကို PJ Harvey ပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကနောက်ခံသီချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ခံစားချက်ဆိုတာတွေက ကျွန်တော်တို့တွေကို လူသားဆန်စေပါတယ်..။ ခံစားချက်မရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ယန္တာရားအရေခွံနဲ့လူတစ်ယောက် သက်သက်ပါပဲ…။ ဇနီးသည်ကားတိုက်သေသွားတဲ့ နောက်နေ့မနက်မှာ အလုပ်သွားခဲ့တဲ့ ခံစားချက်လုံးဝမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်… အရာရာကို ဖြိုချဖျက်စီးပြီး ဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားသလဲ အဖြေရှာတတ်တဲ့ စိတ်ရောဂါသမားတစ်ယောက်… ဒီလို ယန္တာရားအရေခွံနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်.. အတွေး… ပြောင်းလဲပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ဒီရုပ်ရှင်မှာ Jakeရဲ့ အကောင်းဆုံး acting skillတွေနဲ့ ပီပီပြင်ပြင် ဖော်ညွှန်းသွားပါတယ်။ ဒီကားဟာ တိကျတဲ့ ရသမရှိပေမဲ့ ဝေဝါးထူးခြားတဲ့ ရသတစ်ခုကို ဖော်ညွှန်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ Comedy , Drama ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ Jake Gyllanhaal (Main castအဖြစ်) သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ကားတွေဟာ မကောင်းတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ Demolitionမှာလဲ သူ့ရဲ့ အနုပညာမှော်ဝင်စားမှုကို တွေ့ရဦးမှာပါ…..
Disney Channel ကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ IMDB 6.4 ထိရရှိထားတဲ့ Adventure,Comedy,Family,Fantasy ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Disney ၏ လူသိများကျော်ကြားသော ဗီလိန်များဖြစ်ကြသည့် မယ်လီဖီဆမ့် ၊ စနိုးဝှိုက်မင်းသမီးအား ပန်းသီးအဆိပ်ကျွေးသူ အီဗယ်ဘုရင်မ ၊ အာလာဒင်နှင့် မီးခွက်စောင့်ထဲမှ ဗီလိန် ဂျာဖာနှင့် 101 Dalmatians ခွေးလိမ္မာကားထဲမှ ဗီလိန် ခရူလာဒီဗယ် တို့၏ သားတော်သမီးတော်များဖြစ်ကြသည့် မော်လ် ၊ အီဗီ ၊ ဂျေ နှင့် ကာရ်လော့စ် တို့သည် သူတို့မိဘများ အချုပ်ချထားသည့် ကျွန်းပေါ်မှ တိုင်းပြည်သို့ ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့်ရောက်သွားကြရာ မိဘများကသူတို့ရဲ့အငြိုးအတေးအား ကလဲ့စားချေရန်အတွက် သူတို့သားသမီးများကို အားကိုးကြပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ ဒဏ္ဏာရီနတ်သမီးရဲ့ မှော်တုတ်ကို ခိုးပြီး မိဘတွေရဲ့ အကျယ်ချုပ်ကို လွတ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ မိဘများက အတင်းအကြပ် လွှတ်လိုက်ကြတဲ့အခါ လူငယ်သဘာဝ မိဘကိုကြောက်စိတ်ဖြင့် မလွန်ဆန်နိုင်ကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထားမြင့်မြတ်သော ဘုရင် အေဒမ်နဲ့ ဘုရင်မ ဘယ်လီတို့ရဲ့ တဦးတည်းသော သားတော် ဘန်ဂျမင်မင်းသားရဲ့ အပြုအမူတွေရယ် ၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအပါတို့ရဲ့ နိမ့်ကျတဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေရယ်ကြောင့် သူတို့ ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမယ်… သူတို့မိဘတွေရဲ့ ဆန္ဒကိုအတိုင်း ဂလဲ့စားချေကြမလား… တိုင်းပြည်မှာရော ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြမလဲ .. ဇာတ်လမ်းတခုလုံး စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပျော်စရာတွေ ပြည့်နှက်တွေတာကြောင့် တကယ်ကို လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ကားလေးတကားပါ။ ကျန်တာတော့ ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ရင်း ဆုံးဖြတ်ကြပါလို့။
ဒီဇာတ်ကားက တရုတ် Romance ဇာတ်ကားလေးပါ။ မင်းသား Li Yifeng နဲ့ မင်းသမီး Yang Mi တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ မင်းသားရော မင်းသမီးရော Swords of Legends သိုင်းကားစီးရီးထဲမှာ အတူတကွသရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Star တစ်ယောက်ကိုချစ်မိတဲ့ အချစ်နဲ့ လျှို့ဝှက်မြိုသိပ်မှုတွေကြား ဘာတွေက ချစ်သူနှစ်ယောက်ကို ဝေးကွာစေမလဲ… အချစ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကရော ချစ်သူနှစ်ဦးကို နီးကပ်လာစေမှာလားဆိုတာ………..။ အချစ်ကားသန့်သန့်လေး ခံစားချင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
စကြဝဠာနဲ့ လူတွေရဲ့ ရူးသွပ်မှုသာ အဆုံးမဲ့ဖြစ်တယ်။အရှေ့ကတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် မသေချာဘူး” လို့ ၂၀ ရာစုရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင်လို့ သမုဒ်ခံထားရတဲ့ Albert Einsteinကပြောခဲ့ပါတယ်။ လောဘကြောင့် ဒေါသကြောင့့်မောဟကြောင့် လူတွေ ရူးသွပ်နေကြပါတယ်။Thor ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ Loki အဖြစ်တွေ့ရတဲ့ Tom Hiddletonကို High Rise (2015) မှာတော့ သူ့ရဲ့ရူးသွပ်မှုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ခံယူလိုက်တဲ့ Dr. Laing အဖြစ်တွေ့ရမှာပါ။ Tomရဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကို ဒီဇာတ်ကားမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နိုင်မှာပါ။ ဆိုးဆိုးရွားရွား ရူးသွပ်သူတွေကြားမှာပုံမှန်ရူးသွပ်သူက ဆိုးရွားသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတတ်တာကိုDracula:Untold မင်းသား Luke Evans က Richard Wilderနေရာကနေသရုပ်ဆောင်ပြသွားပါတယ်။ Free will ဆိုတဲ့လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်ထားမှာ သန့်ရှင်းမှု တရားမျှတမှု ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေ ဆိုတာရှိဖို့မလိုပါဘူးဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးပြပေးထားပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ စိတ်ထားရှိသူတွေကို အာဏာရှင်တစ်ယောက်ကမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာရောပေါ့။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဦးနှောက်ခွဲစိတ်ဆရာဝန် Laingတစ်ယောက် အထပ်မြင့်တိုက်မှာသွားနေပြီးတော့ ဖြစ်ပျက်ကြတဲ့အကြောင်းလေးတွေကနေ ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ထားတာပါ။ သွေးထွက်သံယိုခန်းနဲ့ sexခန်း နည်းနည်းပါလို့မိသားစုနဲ့ကြည့်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဇာတ်ကားကိုက တစ်ယောက်တည်းကြည့်ပြီးထိုင်တွေးရမယ့်ကားမျိုးဖြစ်လို့တစ်ယောက်တည်းပဲအေးအေးဆေးဆေး ကြည့်ဖို့ Recommendပေးပါရစေ။
အချစ်လောကမှာ အိုသွားလို့အပယ်ခံထားရတဲ့ အိုပယ်မတ်မတ်တွေ အတွက်တရုတ်မင်းသမီးရှုကြည်ပါဝင်တဲ့ Romance အချစ်ဇာတ်ကားလေးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေဟာ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာအလှဆုံးပဲ လို့ လူတွေက တင်စားကြတယ်
အသက် ၃၀ အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အလှဟာရင့်ကျတ်ခြင်း နဲ့ တည်ငြိမ်ခြင်း ပေါင်းစပ်ထားပြီး
ကံစမ်းမဲ ပါတဲ့ ဘီစကစ်လေးတွေ နဲ့ တူနေပြန်တယ်
ကံစမ်းမဲ ပါတဲ့ ဘီစကစ်ဟာ ကျွတ်ဆတ်ဆတ် ဖြစ်နေတက်ပြီးအထဲမှာတော့ ကံကောင်းမှုတွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့…
ရှန်းယူရီ ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဟာ သူ့ တစ်ဘဝလုံးပညာရေး နဲ့ အလုပ်ကို ဦးစားပေးခဲ့တဲ့အတွက်
အသက် ၃၀ ပြည့်တော့မယ့် အထိတောင်ယောင်္ကျားယူဖို့ မပြောနဲ့ ရည်းစားလေး တစ်ယောက်ရဲ့အနမ်းတောင် ရင်မဆိုင်ဖူးခဲ့ပါဘူး…
တရုတ်လူမျိုးတွေ ရဲ့ အယူအဆ အရ အသက် ၃၀ ပြည့်လို့မှအိမ်ထောင်မကျသေးရင်
ချို့ယွင်းချက် ရှိသလိုလိုဘာလိုလို လူထင်သေးခံရတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ
ဒါကြောင့် ရှန်း ဟာ သူ့အမေ နဲ့ ဘယ်နေရာကိုမှ မသွားချင်တော့တာလဲယောင်္ကျားယူဖို့ ဖိအားပေးခံရလွန်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်….
သူလဲပဲ သူ့ကို တကယ်ချစ်တဲ့ ယောင်္ကျားလေး တစ်ယောက်နဲ့ဆုံပြီး ကံကောင်းချင်ခဲ့တာပေါ့…
ဒါကြောင့် နှစ်သစ်ကူး ညမှာပဲ သူဆုတောင်းခဲ့တယ်သူမျှော်လင့်တဲ့ ဖူးစာဖက်နဲ့ ဆုံနိုင်ပါစေလို့….
နောက်တစ်နေ့ ရုံးတက်တဲ့နေ့မှာပဲရုံးထဲဝင်ဖို့ ကတ်ပြား ပျောက်လို့ ပြသနာတက်ချိန်မှာပဲကောင်လေး တစ်ယောက်ကို စတင်ဆုံစည်းခဲ့တယ်…
သူကတော့ ရှန်း ရဲ့ လက်ထောက် ဖြစ်လာမယ့်မာစိုင်း ဆိုတဲ့ ကောင်လေးပါပဲ…
မာစိုင်း က သူ့ထက် ငယ်ပါတယ် သွတ်လက်တယ်ရဲရင့်တယ် ရုပ်ချောတယ် အရာရာပြည့်စုံတဲ့ ကောင်လေးပါပဲ
သူတို့နှစ်ယောက်ကြား ကောင်းကင်ပြာကြီး ဘယ်လိုဖြစ်တည်လာမလဲဆိုတာ…။
ကိုယ်တိုင်ကြည့်မှ စီးမျှောခံစားလို့ကောင်းတာရှန်း နေရာမှာ နာမည်ကြီးမင်းသမီးချောရှုကြည် က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးရှုကြည်ရဲ့ အလှရှုကြည် ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ အောက်မှာ အသက်ရှုဖို့မေ့မေ့သွားနိုင်ပါတယ်….
ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်သင့်တာကတော့ မမ တွေကိုကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးတွေ ကြည့်သင့်တယ်
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မမ တွေရဲ့ စိတ်ကို နားလည်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းလမ်းစ ဟာ ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ ရှိနေတယ်…
နောက်တစ်ခုကတော့ အသက် ၃၀ နဲ့ ၄၀ ကြားလုပ်ငန်းရှင် Single အမျိုးသမီးတွေ ကြည့်သင့်တယ်…
ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အချစ်သက်သက် မဟုတ်ပြန်ဘဲ
လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုရဲ့ တာဝန်ရှိသူ အနေနဲ့အလုပ်ကို ဘယ်လို လုပ်ရလဲ
ဘယ်လိုတွေ တာဝန်ယူရလဲဆိုတဲ့ စိတ်ကိုပါ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်….
ပြောရရင် မိုတီဗိတ် ဖြစ်စေတာပေါ့
အချစ်ကြောင့် ရူးမိုက်မိုက်တွေ လုပ်တာအချစ်ကြောင့် ဆင်ခြင်နိုင်ခဲ့တာတွေဒီရုပ်ရှင်ထဲ အကုန်ပါ ပါတယ်….
သင်ကြည့်နေပါတယ်လို့ စိတ်ထဲအတွေးမဝင်ခင်လေးမှာ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့အဆုံးသတ်ကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်…..
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်မှာ သင်ပြုံးမိပါလိမ့်မယ်ဝမ်းနည်းအပြုံးလား ပျော်ရွှင်တဲ့ အပြုံးလားဆိုတာကိုတော့
နှင်းရိပ်အုံ့မှိုင်း မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့ ညတစ်ညမှာ ဆွန်မီဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ သူ့မှာသွေးဖြူဥဆဲလ်ပုံစံပြောင်းရောဂါရှိနေမှန်းစတင်သိခဲ့ရပါတယ်…အချိန်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆွန်းမီတစ်ယောက် နာကျင်မှုတွေကိုကျော်လွှားခဲ့ပြီး အရွယ်ရောက်တဲ့လူသားအဖြစ်နဲ့ လောကကြီးကိုစတင်ရင်ဆိုင်ပြီး ရေမွှေးပညာရှင်အဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ် ၊တစ်နေ့မှာ ငါးပြတိုက်မှုးအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆွန်းဝူးဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံတယ် သူ့ရဲ့လက်က အနံ့ အထိအတွေ့က ဆုံးပါးသွားတဲ့သူ့အဖေနဲ့အရမ်းတူတာကြောင့် နွေးထွေးမှုတစ်ခုကိုပြန်ခံစားရပြီး စွဲလမ်းလာခဲ့ပြန်တယ် ၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့သံယောဇဉ်ရှိလာ လက်ထပ်ဖို့အထိဖြစ်လာပါတယ် ။ဒါပေမယ့်သူမရဲ့ရောဂါအခြေအနေကြောင့် မိဘတွေကသဘောမတူနိုင်ခဲ့ပါဘူး… သူမရဲ့ရောဂါအခြေအနေက ရှေ့ဆက်ဖို့အဟန့်အတားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ရောဂါကိုကုဖို့ နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရှုရမှာပါ ။ နာတာရှည်ခံစားနေရတဲ့သူအတွက် ဘေးကဖေးမပေးမဲ့သူကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ခံစားဖူးတဲ့သူတွေမှသာသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးပါ….ဒီကားမှာအဲဒီခံစားချက်မျိုးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ၊ တော်ရုံမခံစားတတ်တဲ့သူတွေတောင် တစ်ခုခုတာ့ခံစားမိပြီး ၊ သေချာတာကတော့ ရင်ထဲမှာတစ်ခုခုကျန်ခဲ့မှာပါ…Castတွေအနေနဲ့ကတော့ cheese in the trapထဲက မင်းသား Park-Hae-Jin နဲ့ Vampire prosecutor ထဲက မင်းသမီး Lee-Young-Ah တို့ကပါဝင်ထားပါတယ် ။IMDb ratingအနေနဲ့ကတော့ 6.5/10ရရှိထားပါတယ် ။(အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Ingyin San ဖြစ်ပါတယ်)[Zawgyi]နှင်းရိပ်အုံ့မှိုင်း မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့ ညတစ်ညမှာ ဆွန်မီဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ သူ့မှာသွေးဖြူဥဆဲလ်ပုံစံပြောင်းရောဂါရှိနေမှန်းစတင်သိခဲ့ရပါတယ်…အချိန်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆွန်းမီတစ်ယောက် နာကျင်မှုတွေကိုကျော်လွှားခဲ့ပြီး အရွယ်ရောက်တဲ့လူသားအဖြစ်နဲ့ လောကကြီးကိုစတင်ရင်ဆိုင်ပြီး ရေမွှေးပညာရှင်အဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တယ် ၊တစ်နေ့မှာ ငါးပြတိုက်မှုးအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆွန်းဝူးဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံတယ် သူ့ရဲ့လက်က အနံ့ အထိအတွေ့က ဆုံးပါးသွားတဲ့သူ့အဖေနဲ့အရမ်းတူတာကြောင့် နွေးထွေးမှုတစ်ခုကိုပြန်ခံစားရပြီး စွဲလမ်းလာခဲ့ပြန်တယ် ၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့သံယောဇဉ်ရှိလာ လက်ထပ်ဖို့အထိဖြစ်လာပါတယ် ။ဒါပေမယ့်သူမရဲ့ရောဂါအခြေအနေကြောင့် မိဘတွေကသဘောမတူနိုင်ခဲ့ပါဘူး… သူမရဲ့ရောဂါအခြေအနေက ရှေ့ဆက်ဖို့အဟန့်အတားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ရောဂါကိုကုဖို့ နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရှုရမှာပါ ။နာတာရှည်ခံစားနေရတဲ့သူအတွက် ဘေးကဖေးမပေးမဲ့သူကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ခံစားဖူးတဲ့သူတွေမှသာသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးပါ….ဒီကားမှာအဲဒီခံစားချက်မျိုးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ၊ တော်ရုံမခံစားတတ်တဲ့သူတွေတောင် တစ်ခုခုတာ့ခံစားမိပြီး ၊ သေချာတာကတော့ ရင်ထဲမှာတစ်ခုခုကျန်ခဲ့မှာပါ…
Mission Impossible V Rogue Nation 2015
ဒီရုပ်ရှင်ကားကို ပိုစတာ မြင်ရုံနဲ့ စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ် ကောင်းကောကောင်းရဲ့လား အရည်မရ အဖတ်မရတွေလားလို့တွေးထင်ခဲ့ဖူးတယ် ….အရင်ဆုံး သိလိုက်ရတာကတော့ IMDb မှာ 7.8 Rating ရရှိထားတာပါ။ Asia ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာ အတော်ရှားပါးတဲ့ Rate မျိုးပေါ့….i Fine i Thank I Love U ထဲက မင်းသား အပါအဝင် Pee Mak ရုပ်ရှင်ကားထဲမှ မင်းသမီး ပါဝင်ပါတယ်..ဇတ်လမ်းပုံစံ အစပျိုးထားတာကတော့ ယွန်း ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက ဂရစ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာပါ သူဟာ အလုပ်အလွန်ကြိုးစားသူဖြစ်ပြီးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင် ဇွဲရှိရှိလုပ်တာမို့ ညမအိပ်တန်း လုပ်ဖြစ်ပေမယ့် သူ နောက်ဆုံး လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ဟာဘယ်လောက်အောင် ညမအိပ်ပဲ လုပ်လဲဆို ၄ ရက်ခွဲ တိတိ သူမအိပ်ပဲ အလုပ်အပ်သူ စိတ်တိုင်းကျ ပုံတွေ ပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်အလုပ်အပ်သူက သဘောကျပေမယ့် သူ့ရဲ့ အိပ်ချိန်တွေဟာ ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ် ဒါကိုပဲ ယွန်းက ဂုဏ်ယူနေတက်သူပါကမ္ဘာပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဆုံး လူသား ညမအိပ်တဲ့ သူဆိုပြီးတော့ပေါ့….ယွန်း ကို အလုပ်အပ်သူတွေ နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးတာကတော့ ယွန်း ရဲ့ BFF ဖြစ်တဲ့ ဂျဲလ် ပါအလုပ်အရမ်းများတဲ့ ယွန်း မှာ ဂျဲ ဆိုတဲ့ ပြောမနာ ဆိုမနာ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးပဲ ရှိပြီး လူမှုရေး ကိစ္စတွေ မှာအချိန်မပေးနိုင်လို့ ယွန်း ကို ဘယ်သူငယ်ချင်းကမှ အပေါင်းအသင်းမလုပ်ပါဘူး…တစ်ရက်မှာတော့ သူ ငွေကြေးနဲ့ လဲလှယ်ခဲ့တဲ့ သူ့အချိန်တွေကတေ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ယွန်း ရဲ့ ကိုယ်မှာ အနီစက် မြောက်များစွာ ပေါ်လာပြီး ယားနာလိုတွေ ဖြစ်လာပါတယ် အစက သိပ်မသိသာပေမယ့်နောက်ပိုင်းရောဂါ ပိုဆိုးလာလို့ အပြင်ဆေးရုံမှာ သွားပြတဲ့ အခါ ဘတ် ၇၀၀၀ ကျော် ကျသွားပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် ၂ သိန်း နီးပါး ပါ ဒါပေမယ့် ထိုဆေးတွေ နဲ့လဲ သူမသက်သာတဲ့ အခါOnline မှာ လိုက်ရှာဖွေတဲ့အခါ ရောဂါ သက်သာပြီး စရိတ်စက နည်းတဲ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာ အရေပြား ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာအမ် နဲ့ စတွေ့ရပါတော့တယ်…ဒေါက်တာ အမ် က ယွန်း ကို အလုပ် က ဘ၀ မဟုတ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ဖို့ ဆေးသောက်ဖို့ အပြင်စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ ကျန်းမာဖို့ နေထိုင်နည်းတွေပါ ပေးလိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အလုပ်အရမ်းများလွန်းတဲ့ ယွန်း ဟာဘယ်သူ့ စကားမှ နားမထောင်ပေမယ့် ဒေါက်တာအမ် နှင့် စတွေ့ပြီး နောက်ပိုင်း အတည်တကျ ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ချိန်တွေ ဇယားတွေ နဲ့ ပြည့်နေတဲ့ သူ့ဘ၀ ဟာ ကမောက်ကမ တွေ စဖြစ်လာပါတော့တယ်…
2015 တုန်းက ထွက်ရှိထားတဲ့ Wolf Totem ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ၁၉၆၀ ဝန်းကျင်က လွင်ပြင်ဒေသတွေမှာ နေထိုင်တဲ့ မွန်ဂိုလူမျိုးစုတွေရဲ့ နေထိုင်မှု ပုံစံတွေ ရိုးရာယဉ္ကေျးမှုတွေ ကိုးကွယ်မှုတွေကို မြင်တွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒါ့အပြင် ဇာတ်လမ်းမှာ နောက်ထပ်ပြသထားတာက မွန်ဂိုလွင်ပြင်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ဝံပုလွေတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ဒီဇာတ်လမ်းမှာ မင်းသားကြီး Feng Shao Feng က ချန်ကျန့်အဖြစ် အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး လူသားနဲ့ ဝံပုလွေရဲ့ကြားက သံယောဇဉ် မေတ္တာကို ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ကျူးထားပါတယ် ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ ချန်ကျန့်ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ မွန်ဂိုဒေသမှာ ၂ နှစ်ကြာ စာပေသင်ကြားပေးဖို့ စေလွှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်… ချန်ကျန့်ဟာ မွန်ဂိုလွင်ပြင်ဒေသမှာနေထိုင်းရင်း ဝံပုလွေတွေရဲ့ သဘာဝကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပါတယ် ၊ တစ်နေ့မှာတော့ လောဘကြီးတဲ့ လူတစ်စုကြောင့် ဝံပုလွေအုပ်စုတွေ ဒုက္ခတွေ့ခဲ့ရပါတယ်… ဝံပုလွေသားပေါက်လေးတွေကို သတ်ပစ်ဖို့ အစိုးရက အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ မွန်ဂိုတွေဟာ ဝံပုလွေ သားပေါက်လေးတွေကို သတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် သားပေါက်တွေထဲက တစ်ကောင်ကို ချန်ကျန့်က တိတ်တဆိတ်မွေးမြူထားခဲ့ပါတယ်…ဒါကို အထက်လူကြီးတွေ သိသွားတဲ့အခါမှာ ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ… ချန်ကျန့်ကရော ဝံပုလွေသားပေါက်လေးကို လွင်ပြင်ဆီပြန်လွှတ်မှာလား… ဝံပုလွေအုပ်စု မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ခံရမှုကို တားဆီးပေးနိုင်မှာလား… ဝံပုလွေအုပ်စုတွေ ဘယ်လို အခက်ခဲတွေနဲ့ ကြုံရမှာလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါနော်…
Matrix မင်းသားကြီး Keanu Reeves အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Mystery, Thriller အမျိုးအစား ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကိုပြောလိုက်ရင် ပေါ့သွားမှာစိုးတဲ့အတွက် မဖော်ပြတော့ပါ။ Knock ဆိုတာ တံခါးခေါက်သံ လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး “တချို့တံခါးတွေက လုံးဝမဖွင့်သင့်ဘူး” ” Some doors should never be opened ” လို့ ခေါင်းတည်ထားပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်ယောင်္ကျားတွေကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး တချို့အခန်းတွေက Nudity အပြောအဆို ပြကွက်တွေပါနေလို့ မိသားစုနဲ့တော့မကြည့်သင့်ပါ။
ဒီဇတ် လမ်းလေးကကျွန် တော် နှစ် သက် မိတဲ့ဇတ် လမ်းလေးဖြစ် ပြီးခများတို့လည် းကြိုက် န ှစ် သက် လိမ့်မယ် လို့ ပြောရင် မှားမယ် မထင် ပါဘူး…ဘာလို့လဲဆိုရင် …. ဇတ် လမ် းအစမှာ… တောင် းတန် းရှု့ခင်းတွေရဲ့အလှကိုအသား ပေးရိုက် ကူးထားပါတယ် ..ဒါက တော့..သူတိုရုပ် ရှင် ပရိတ် ပေါ်ဆွဲ ဆောင် နည် းတစ် မျိုး ပေါ့ နော် …. နောက် ပြီး.မုန် တိုင် းဝင် လာတဲ့အချိန် မှာ.. နောက် ခံတီလုံးမှု ကောင် းမှု..effect ကောင်းကောင်းတွေနဲ့ရိုက် ချက် ပီပြင် တဲ့ဒီကားဟာ.. IMDB 6.7ထိရရှိထားပါတယ် .. ဒီကားမှာအနှစ် သက် ဆုံးအခန်းလေးက တော့..မိသားစုအတွက် .. အသက် ပေးပြီး..ကယ် တဲ့..ဖခင် တစ် ယောက် ရဲ့ မေတ္တာကိုထင် ထင် ရှားရှားကြီးမြင် တွေ့ကြရဦးမှာဖြစ် ပါတယ်
2015 ထွက်ရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.ဒီဇာတ်ကားဟာ IMDb Rate လည်း 7.0 ရရှိထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်…Brian Helgeland ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြီး ရိုက်ကူးပြီးရုံတင်တဲ့အခါမှာလည်း USD 41.6 Million ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ် ဇာတ်ကားအမျိုးအစားကတော့ Biography , Drama , Crime အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်1960 ဝန်းကျင်ခေတ်ကိုအခြေခံထားပြီး ဒီဇာတ်ကားဟာ ဗြိတိသျှတို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုသမိုင်းက အဆိုးဝါးဆုံး ညီအကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်…သဘောကျမိတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်သလို CM ပရိတ်သတ်တွေလည်း သဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ် လို့ထင်ပါတယ်..ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ
သရဲကားတွေ ဟာသကားတွေ ရိုမတ်တစ်ကားတွေ ကြည့်ပြီး ပျင်းနေကြပြီလားဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားကတော့ မပျင်းရဘူး အသည်းတထိတ်ထိတ် နဲ့ ကြည့်ရမယ့် အက်ရှင်ဇာတ်ကားပါဇာတ်လမ်းနာမည်ကတော့ “No Escape” ပါအညွှန်းလေးဖတ်ကြည့်ဦးနော်.. ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အင်ဂျင်နီယာ ဂျက် ဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ အတူ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ကို ရေသိုလှောင်ရေး စီမံကိန်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်… အဲ့နိုင်ငံ လဲ ရောက်ရော အမေရိကန် လူမျိုးတွေ အပေါ်မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့ လူအုပ်စုရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ဂျက်တို့ မိသားစု ပတ်ပင်းတိုးခဲ့ပါတယ် ဂျက် နဲ့ သူ့မိသားစု ဟာ escape မရနိုင်ဘဲ သူများနိုင်ငံမှာ အတော် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ် ဇာတ်လမ်းခေါင်းစဉ် No escape ဆိုတဲ့ အတိုင်းဘဲ လွတ်မြောက်ဖို့ တကယ် ခက်တာပါ အသတ်ခံရမယ့် ဘေးကနေ လွတ်အောင် ကြိုးစားတာတွေကို ရင်တထိတ်ထိတ် နဲ့ကြည့်ရှူရမယ့် အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းပါ ဒီဇာတ်ကားကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ က ဘန်း ထားပါတယ်
The Last Witch Hunter ================== လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ လောက်က လူသား တွေ ကသူတို့ဖာသာ အိုးအိမ်တွေမြို့သစ် တွေတည်ပြီး စည်ပင်ထွန်းကားခဲ့ကြတယ် တန်ခိုးသြဇာ ကြီးမားခဲ့ကြတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့ မေ့လျော့နေခဲ့တာက မွေးရာပါပါရမီ ထူးပါလာပြီး ဆရာ မလို လမ်းကြောင်းမယ့် သူမလိုပဲအောက်လမ်းပညာတွေမှော်အတတ် အစီမံတွေ ကျွမ်းကျင်နေတဲ့ လူတစ်စုပဲ တစ်နည်းအားဖြင့် စုန်းတွေပေါ့ စုန်းတွေနဲ့ လူ တွေကြားက ပဋိပက္ခတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှ လှိုက်စားကြီးထွားလာတယ် အမုန်းအာဃာ တတွေကလဲ လမ်းဆုံးမရှိတဲ့ခရီးလမ်းလို များပြားထွေလီရှည်လျားခဲ့တယ် ဒီလိုနဲ့ သေမြေကြီးရှင်ရွှေထီးဆိုပြီး ထင်ရာစိုင်း တဲ့ဗိုက်ကင်းတွေ မိမိတိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက် အသက်စွန့်တိုက်ခိုက်မယ့်ရဲရဲတောက် သူရဲကောင်းတွေ သူတို့ အသက်ကအရေး မပါဘူူး သူတို့မှာဖက်တွယ်စရာအိုးအိမ် တွေလဲ မရှိရှာတော့ဘူူး ဒီကြမ္မာငင်ဇာတ် လမ်းဆိုးကို ပြန်နားထောင်ပေးမယ့်သားမြေး မြစ်တွေလဲ မရှိတော့တဲ့အချိန် ရော်ရင့်နေတဲ့ သစ်ပင်အိုကြီး မကောင်းမှုတို့ အလုံးစုံအတိ ပြီးတဲ့ စုန်းအသိုက်မြုံထဲ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက် ကြတယ် ဗင်ဒီဇယ် တဖြစ်လဲ ကော်ဒါ ဦး ဆောင်တဲ့ တပ်စုလေး အောက်လမ်းစုန်း တွေရဲ့ ခြောက်ခြားမှုတွေအောက်မှာသွေး မပျက်အောင်ကြိုးစားထိန်းနေရတယ်တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် တစ်သက်ပြီး တစ်သက်ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ သွေးသောက် ညီကိုတွေကိုကြည့်ပြီး သံထည်နဲ့မီးတောက် အားကို ပြု ပီး ကော်ဒါတစ်ယောက် မိစ္ဆာမရင်ဝကို ဒီလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်တဲ့ ပုလိပ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးဖန်တီးရှင်ရဲ့ အသဲ အူတည့်တည့်ကို အမုန်းဓားတစ်ဆင်းထိုး စိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ် စုန်းဘုရင်မကြီး နိဌိတံပြီး ပုလိပ်ရောဂါဆိုး ကြီးလဲ ချုပ်ငြိမ်းပြီ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ မမျှော်လင့်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာ လျှပ်ခနဲ ဆိုသလိုကျိန်စာတစ်ခု အထမြောက်သွားခဲ့ တယ် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေသေတာထိုင်ကြည့် ရတဲ့ကျိန်စာ နှစ်ပရိစ္ဆေဒကြာညောင်းတဲ့ အထိ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာချေချနေရတဲ့ကျိန်စာ မိမိသမီးလေးအတွက် ချစ်ကြင်သူဇနီးမယား အတွက် လက်စားချေတဲ့ ဒီကော်ဒါဆိုတဲ့ ဗိုက်ကင်းကြီး တစ်နည်းအားဖြင့် နောက်ဆုံး ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့စုန်းလိုက်မုဆိုးကြီးကို အရိပ် တစ္ဆေလို ကပ်ပါသွားခဲ့တယ်ဒီလိုကားမျိုးဆိုတာ ဝေဖန်ရေးနဲ့လေကန်ရေး လုပ်ပြီးကြည့်ရမယ့်ကားလို့မထင်မိပါဘူး မြှုပ်ကွက်လေးတွေတော့ရှိပေမယ့် သြချ ရလောက်အောင်မပြောင်မြောက်ဘူး ရွက်ကြမ်းရေကျိုအဆင့်လို့လဲပြောလို့မရ ဘူး အက်ရှင် scene တွေလန်းတယ် ဗင်ဒီဇယ်ကြီးကို ဗိုက်ကင်းလိုပုံဖော်ထား တာမိုက်တယ် ကြည့်ရတာ အရသာရှိတယ် effect တွေကောင်းတယ် ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ ဝေဖန်ရမယ့်အပိုင်းတွေကတော့ rating ကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်
” အောင်မြင်မှုကို ရဖို့ ခက်လား” ” အောင်မြင်မှုကို ထိန်းဖို့ ခက်လား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုကို အမေးခံရလို့ နောက်ဆုံးကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့မိမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေရလဒ်တစ်ခုပေါ့။ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့ အဓိပါ္ပယ်က Any Body Can Dance -ABCD ဖြစ်ပြီး IMDB – 5.4/ 10 လည်းရရှိထားကြောင့် မလွတ်တမ်းကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းဆူရှပ် ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ မွန်ဘိုင်းစတန်နာ အကအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့။ အခုလည်း HKKN ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယအကရှိုးပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ထားပြီး အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။သို့သော် ဆူရှပ် ဖန်တီးတဲ့ကကွက်တွေဟာ ဖိလစ်ပိုင်လူငယ်ကကွက်အတိုင်း မလွဲမသွေ တူနေတာကြောင့် ဒိုင်လူကြီးတွေက သူတို့အဖွဲ့ကို ပြိုင်ပွဲကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။ လူလိမ် တွေအဖြစ် ပရိသတ်တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုနဲ့ မွန်ဘိုင်းစတန်နာ အဖွဲ့ဟာလည်း ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အရှက်တကွဲ ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဆူရှပ်ဟာ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ သူ့အဖွဲ့ရဲ့သိက္ခာကို ကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့ ပြန်လည်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။တစ်နေ့မှာတော့ ဆူရှပ်ဟာ အရက်ဘားတစ်ခုမှာ စားပွဲထိုးလုပ်နေရင်း ကကွက်အလှတွေနဲ့ သူ့စိတ်ကို ဖမ်းညှိစေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့မိတယ်။.သူ့နာမည်က ဗစ်နူး။ဆူရှပ်သိသလောက်တော့ ဗစ်နူးဟာ အရက်ဂျိုးတစ်ယောက်ပေမဲ့ အကဘုရင်တစ်ဦးပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ဆူရှပ်ဟာ ဗစ်နူးမူးနေစဉ် အိမ်ကို ညစဉ် ပြန်ပို့ပေးပြီး တပည့်အဖြစ်အကသင်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဗစ်နူးကတော့ ဆူရှပ်ကို လူလိမ် ဖြစ်နေတာကြောင့် သင်မပေးခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ ဆူရှပ်ဟာ အလျှော့မပေးသေးဘဲ သူ့အကအဖွဲ့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိကမျှော်လင့်ချက်ကတော့ လက်ဗီးဂတ်စ် မှာကျင်းပတဲ့ Hip Hop အကပြိုင်ပွဲမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအသင်းအဖြစ် ယှဉ်ပြိုင်လိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဗစ်နူးကိုလည်း တပည့်အဖြစ်လက်ခံပေးရန် အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ —???ကဲ— ဘာတွေဖြစ်ကြမလဲ ဆိုတာတော့ ရုပ်ရှင် ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ အသိဉာဏ်တစ်ခုကို ရိုက်သွင်းစေခဲ့ပါတယ်။ အကအလှတွေကလည်း မြူးထူးစေပြီး ဇာတ်လမ်းအဆုံးထိ မငြီးငွေ့သွားရပါဘူး။ဒီကားလေးက Any body can dance ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ Any body can dream လေးပါ။ ကျရှုံးရင် ပြန်ထတတ်တဲ့ စိတ်ကို သင်ကြားစေခဲ့ပြီး ကြိုးစားမှုသာ အဓိကဆိုတဲ့မူကို ဒီဇာတ်ကားလေးက မီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိသားစုသဖွယ် နွေးထွေးမှု၊ ပေးဆပ်တတ်မှု၊ စာနာမှု၊တာဝန်ယူမှု စတဲ့ လောကကျင့်ဝတ်တွေပါ ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့် သင်ခန်းစာလည်းပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။
မြို့ကြီးပေါ်ပဲမွေးမွေး မြို့လေးပေါ်ပဲမွေးမွေး ဇနပုဒ်ကလေးမှာပဲမွေးမွေး အချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်တော့ . . .
ပြန်မရတော့တဲ့ အသက်အရွယ်က ပြန်မရတော့တဲ့ အမှတ်တရတွေရှိနေတဲ့ ကိုယ့်မြို့ကလေးကို ချစ်တဲ့စိတ်က
အားလုံးရဲ့ ရင်မှာအမြစ်တွယ်နေကြမှာပါပဲ။အဆောက်အဦးအဟောင်းတွေဖြို အသစ်တွေဆောက်ကြလို့
ပုံသဏ္ဍာန်တွေသာပြောင်းသွားကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ မမှတ်မိနိုင်စရာ အမှတ်တရဆိုတာ
မရှိပါဘူး။ အမှတ်တရဆိုတာ ရုပ်၀တ္တုတွေပေါ်မှာမှ မတည်ခဲ့ပဲကို။ ခိုင်လိမြို့ရဲ့ပြာရီမှုန်ဝေခြင်းများဟာ ကျွန်တော်တို့
မြို့တွေအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ ပိုင်ကန်ရဲ့ ဇာတိမြေ ခိုင်လိမြို့ကလေးအကြောင်း။ အပြင်လောကမှာတော့
ခိုင်လိဟာ သူ့ဒေသရဲ့ မြို့‌တော်ကြီးပဲ ဒါပေမယ့် ပိုင်ကန်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ သူချစ်တဲ့မြို့ကလေး သက်သက်။ သူ့မြို့ကလေး
ပေါ် သူချစ်တဲ့အချစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့မြို့ကလေးကို ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အချစ်နဲ့တူတာမို့ ကျွန်တော်တို့နားလည်
နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ ဒီမြို့ကလေးမှာ ရှိနေတဲ့လှပတဲ့အရာတွေကို အခမ်းနားဆုံးပြသွားတာဆိုလို့ အိမ်တွေဘေးက
ရေတံခွန်လေး‌ကလေးပဲရှိမယ်။ အလှတရားဟာ အသွင်သဏ္ဍာန်၌ မတည်ပြီကိုး။
ခိုင်လိမြိုရဲ့ ပြာရီမှုန်ဝေခြင်းများထဲ စီးမျောကြည့်ရင် ပုံရိပ်တွေ၊ ကဗျာတွေ၊ဘ၀တွေဟာ ဝေဝေဝါးဝါးပဲ စီးမျောလာကြတယ်။
လူနှစ်ယောက်ပြောတဲ့ စကားတွေကြားမှာ အစကတော့ သူတို့ရဲ့ အတိတ်ဟာ ဝိုးတိုးဝါးတား။ ကင်မရာရိုက်ချက်ရှည်တွေကလည်း
သူတို့လမ်းသူတို့ လျှောက်ကြရင်း အဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့ လူတွေကို အဖက်မလုပ်ကြဘူး။ဒါပေမယ့်။စကားလုံးပေါင်းများစွာကို
စုစည်းပြီးတဲ့အခါမှာ ဒီလူတွေကို နားလည်လာရတယ်။ ဒီလိုတည်ဆောက်ထားတဲ့ ခိုင်လိမြို့၏ပြာရီမှုန်ဝေခြင်းတွေ။ အင်္ကျီဖြူဖြူ
စကတ်အဝါလေးနဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ စကားဆယ်ခွန်းလောက်ပြောပြီး ခိုင်လိကို အိပ်မက်မက်။ ဆုံးရှုံးမှုကို မခံရပ်နိုင်တဲ့
လူတွေဟာ ကျောခိုင်း။ တစ်ချို့ကလည်း သူများခြေထောက်ဟာ ကိုယ့်ဖိနပ်လောက်မှ အရေးမပါ။ ခိုင်လိရဲ့ ပြန်ဆည်လို့မရတဲ့ ရေ
ပြင်ထဲမှာ ဖိနပ်တစ်ရန် ဘောလုံးတစ်လုံး။ အိမ်မျက်နှာကျက်မှာချိတ်ထားတဲ့ အမှတ်တရဟာ စက်လုံးတစ်လုံး။လေရဟတ်ကလေးရဲ့
သက်တမ်းဟာ စက္ကန့်ကိုးဆယ့်ကိုး ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာက ပိုင်ရှင်ကောင်မလေး ဘယ်လောက်ပျော်ခဲ့ရလဲ။ပြန်လာရမယ့် လူတစ်
ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဝါးခြင်းတောင်းအလွတ်ထဲ ချစ်ခြင်းအပြည့်ဖြည့်ပေးရမယ်။ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ လူတွေဟာ လမ်းအရှည်
ကြီးကို တမေ့တမောသွားကာနေ။ ဓာတ်ပုံဟာ လူရဲ့ ဝိညာဉ်ကို ခိုးယူသွားခြင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရဲ့ ဖြစ်တည်ခြင်းဟာ ဝိညာဉ်ကို
ခိုးထားတဲ့ ဖလင်တစ်ကွက်နဲ့ ဓာတုသားတို့ရဲ့အမှောင်ခန်းအတွင်း ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခိုင်လိမြို့၏ ပြာရီမှုန်
ဝေခြင်းများဟာ ခိုင်လိမြို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပေါင်များစွာကို ခိုးကာယူကာ ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲထည့်ပေးခဲ့တယ် ။
ပိုစတာမှာ အင်္ကျီအဖြူ အဝါရောင်စကတ်နဲ့ မိန်းမငယ်လေး
ပုံပြထားတော့ ဒီဇာတ်ကြောင်းဟာ သူ့အကြောင်းဖြစ်မယ်
အဲ့ဒီမိန်ကလေးက ဒီရုပ်ရှင်မှာ ဇာတ်အိမ်အရေးပါမှုအရ
ရုပ်ရည်ကလည်း ကြည့်ကောင်းရုံကလွဲ ဘာမှတော့
ထူးခြားမနေဘူး။ ဒီလိုMain Plotနဲ့ ဆက်စပ်မှု
အရမ်းနည်းတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကို ပိုင်ကန်က အ၀တ်အစား
စွဲညိစေလိုက်သလိုပေါ့။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်မှာတင်
Mizuki ဟာ ပီယာနို ဆရာမ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်
သူမရဲ့ ခင်ပွန်းကတော့ သွားဆရာဝန် တစ်ယောက်ပါ
ဒါပေမယ့် သူမရဲ့ခင်ပွန်းပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာ ၃ နှစ်ရှိပါပြီ
တစ်ညမှာတော့ ရုတ်တရက်ကြီး သူမခင်ပွန်းက ပြန်လာခဲ့ပြီး
အဲ့နောက်မှာ ၃ နှစ်အတွင်း သူသွားခဲ့တဲ့ အလှဆုံးနေရာတွေဆီ
သူက ကူညီပေးခဲ့တဲ့ လူတွေဆီကို Mizuki ကို ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်
၃ နှစ်ကြာအောင် ဘာကြောင့် ပြန်မလာခဲ့တာလဲ
အခုရော ဘာလို့ ဇနီးဖြစ်သူဆီပြန်လာတာဖြစ်မလဲဆိုတာ
မဲပေးရမယ့် အချိန် ရောက်ပြီ ဆိုတော့ မဲပေးတဲ့ကားလေး ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။
ဘယ်လို မဲပေးကြမှာလဲ? ကိုယ့်ကို မဲပေးဖို့ လုပ်ရမှာလား? ကိုယ့်ကို မဲမပေးဖို့ လုပ်ရမှာလား?
ဘယ်သူတွေအတွက် ဘယ်လို မဲဆွယ်ကြမှာလဲ?
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒီလိုပါ။ လူအယောက် ၅၀ ဟာ အမှောင်ခန်းကြီးတစ်ခန်းမှာ နိုးလာပါတယ်။
သူတို့ကို ကို စက်ဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာ ထားပါတယ်။ ကလေး၊ လူကြီး၊ လူဖြူ၊ လူမည်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊
အိမ်ထောင်သည်၊ အပြာကားမင်းသမီး … စသဖြင့် ပါပါတယ်။ အဲဒီထဲကနေမှ နှစ်မိနစ်ကို တစ်ယောက်
နှုန်းနဲ့ သတ်ဖို့ လူကို ရွေးရပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကို ရွေးမယ် ဆိုတဲ့ စံကတော့ ရှိနေတဲ့ စက်ဝိုင်းထဲက လူ ၅၀
နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ ဘယ်သူ့ကို ရွေးမယ်ဆိုတာကို မဲပေးကြတဲ့အချိန်မှာတော့ …..
လူ့သဘော၊ လူ့သဘာဝတွေကို ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ မြင်ရပါမယ်။ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေကို
မြင်ရပါမယ်။ လူမျိုးရေး ခွဲခြားတာတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပယ်ခံလူသားတွေ၊ ဘာသာတရား ခွဲခြားမှုတွေ
ဒါမျိုး ဝိဝါဒကွဲစရာတွေကို မြင်ရမှာပါ။ ဇာတ်ကား ကြာမြင့်ချိန် တစ်နာရီခွဲ ဆိုပေမယ့် လူတစ်ယောက် သေ
သွားတိုင်း သေသွားတိုင်း အတွေးတွေ ကျန်ခဲ့ရမယ့် ဇာတ်လမ်းမျိုးပါ။ နောက်ဆုံးမှာရော ဘယ်သူ အသက်ရှင်
ကျန်မလဲ ဆိုတာကို ရင်တမမနဲ့ ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
IMDb – 6/10 ရထားပြီးတော့ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ 12 Angry Men ဇာတ်ကားကို Inspire လုပ်ပြီး
(အလန်းစားကားမို့ 1080p5.1ch ပါပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်….)
ဘော်စတွန်မှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင် ဂျိမ်းစ်ဘော်လ်ဂျာကို မသိတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့…
သူဟာဘော်စတွန်မြို့တောင်ပိုင်းမှာ ကြီးပြင်းတယ် သူ့မှာ ဘီလီဆိုတဲ့ညီတစ်ယောက်ရှိတယ်
သူ့ကို ဘော်စတွန်မြို့တောင်ပိုင်းက လူတွေတော်တော်များများချစ်ကြတယ်
ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်ကလူဆိုး လူမိုက် လူပေ လူတေ
သူ့ဘဝရဲ့အရေးအကြီးဆုံး တန်ဖိုးအထားဆုံးက သစ္စာတရားပဲ
ငယ်ငယ်တုန်းက ခင်ဗျားတို့တွေ ကိုယ့်ကို နာမည်ပြောင်လာခေါ်ရင် စိတ်ဆိုးရန်ဖြစ်တတ်ကြတယ်မလား..
ဒီဘော်လ်ဂျာဆိုတဲ့ဘဲလည်း သူ့ကိုနာမည်ပြောင်လာခေါ်ရင် မကြိုက်ဘူး… ဒါပေမဲ့ သူက ရန်တော့မဖြစ်ဘူး… သတ်တာ…
ဇာတ်ကားက အရမ်းကြမ်းပါတယ်..ကလေးသူငယ်နဲ့ သွေးသံရဲရဲကြောက်တတ်တဲ့သူတွေမကြည့်သင့်ပါဘူး..
ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အပြင် Johnny Depp နဲ့ Benedict Cumberbatch အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားလေတော့
ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး အစကနေအဆုံးထိ ဘာတွေဖြစ်မလဲ စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရတဲ့ကားမို့
သာမန်လက်သီးသုံးတာကလွဲလို့ ဘာမှမသိတဲ့ လူမိုက် အန်ဆန်းဂီ
ယုံကြည်ရတဲ့အစ်ကိုကြီးဆီကနေ သစ္စာဖောက်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာ အရာရာလဲပြိုသွားပြီး လက်စားချေဖို့ကိုပဲ အာရုံစိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်
အဲ့အချိန်မှာ ဘာမှနောက်ခံမရှိဘဲ အမှုစစ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဝူဂျန်ဝန် တစ်ယောက် ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးပိုင်းက အမတ်လောင်းတစ်ယောက်ကို ဖမ်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်
အဲ့လိုကြိုးစားရင်းနဲ့ သူရှာဖွေနေတဲ့လူတွေထဲက တစ်ယောက်က အန်ဆန်းဂူ လက်စားချေဖို့လုပ်နေတဲ့ဖြစ်တာကိုသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ အန်ဆန်းဂူကိုချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတော့တယ်
သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး ရန်သူကိုအနိုင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ မမျှော်လင့်ထားတာတွေ ထပ်ပြီးကြုံလာရတဲ့အခါမှာတော့…
လူမိုက်ဖြစ်တာနဲ့ပဲ အမှန်တရားကိုပြောလည်း မယုံဘဲ ပိုက်ဆံကသာအောင်နိုင်သူဆိုတဲ့ အယူအဆကြီးကို ဘယ်လိုများတိုက်ထုတ်ကြမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး ။
ချက်ချင်းတော့ လက်မခံနိုင်သေးတာ လူ့သဘာဝပါ
ဒီကားမှာတော့ ဇာတ်ဆောင်မင်းသမီး ဂျာအန်တို့လင်မယားက
jump scare လည်းအများကြီးမပါတာမို့ ကြည့်ရင်းသနားလာမိမှာသေချာပါတယ်
Subtitle – Burmese
အိမ်ထောင်ဦးစီး William..၊ သူ့ဇနီးသည် Katherine..၊ သမီးကြီး Thomasin..၊ သား Caleb..၊ အမွှာနှစ်ယောက် Jonas နဲ့ Mercy တို့
မိသားစုဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုအပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့နေထိုင်ရာအရပ်ကနေ နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့မိသားစုဟာ လူသူဝေးရာ တောစပ်တစ်နေရာမှာ အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပြီး စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်လို့ အေးအေးလူလူ နေနေခဲ့ကြတယ်။
အဲ့ဒီနေရာလေးမှာ အခြေချပြီး မကြာခင်မှာပဲ Katherine က Samuel ဆိုတဲ့ ကလေးလေးကို မွေးဖွားခဲ့သေးတယ်။
အချိန်ကာလက ၁၇ ရာစု၊ New England တစ်နေရာ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်တော့ သူ့အမေကိုယ်စား Samuel လေးကို ထိန်းပြီး Peekaboo (ဒီမှာဆို တူတူရေဝါး ဆိုတာမျိုး) ဆိုတဲ့ကစားနည်းလေး ကစားနေရင်းနဲ့
Thomasin ရှေ့မှာတင် ကလေးလေးဟာ ချက်ခြင်းပျောက်သွားခဲ့တယ်။
ဒါတင်မကဘူး။ ဘိုးဘွားပိုင် ငွေခွက်လည်း ပျောက်သွားတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကြားမှာ အားလုံးရဲ့လက်ညှိုးက Thomasin အပေါ် ရောက်လာတယ်။
သူထိန်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ကလေးပျောက်တာမို့ သူ့ကို အမြင်မကြည်တာတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။
ဒါ့အပြင် စမ်းချောင်းလေးနားမှာ အဝတ် လျှော်ရင်း ပြောလိုက်တဲ့ သူ့စကားကို မှတ်ထားပြီး Jonas နဲ့ Mercy တို့ နှစ်ယောက်ကလည်း သူ့ကို စုန်းမ လို့ စွပ်စွဲလာကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အားလုံးမထင်မှတ်ထားတဲ့နေ့တစ်နေ့ကို ရောက်လာတယ်။
အဲ့ဒီနေ့က အမဲပစ်ထွက်တဲ့ Caleb နဲ့ အတူ တောထဲကို Thomasin လိုက်သွားတဲ့ နေ့။
စိတ်ဆင်းရဲစရာ ဒုက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒီမိသားစုကို သံသယလှိုင်းလုံးတွေအောက်ထဲ အစွမ်းကုန်နစ်မြုပ်စေတော့မဲ့ နေ့ပေါ့ …
ဒီကားဟာ အနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တစ်ယောက်မှမရှိပဲ အရှေ့ပြန်လှည့်ကြည့်တော့မှ ဘွားခနဲ့ မျက်နှာကြီးပေါ်လာတက်တဲ့ Jump Scare ကားတွေလို မ
ဟုတ်ပဲ ဆင်ကို ကြုံးသွင်းဖမ်းသလို တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်စိမ့်စမ့်နဲ့ကျောချမ်းလာစေမယ့် ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဘောလုံးချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်အကုန်လုံး သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်..”ဒီလူတွေက တခြားဂြိုလ်ကကွ.နှိုင်းယဉ်မနေနဲ့”
တစျခါတစျလတှေေးမိကွတယျ..ဒီလူတှဘေောလုံးကနျတဲ့ခတျကိုမှီတာ ကံထူးလစှေဆိုပွီးတော့ပေါ… သိတဲ့ အတိုငျး
မက်ဆီပါပဲ…အရပ်ခပ်ပုပု လူကောင်သေးသေးညှက်ညှက်နဲ့ ၆ပေဝန်းကျင် လူကောင်ကြီးတွေကြားထဲမှာ ဆံပင်လေးတွေနဲ့အတူ
ယိမ်းရင်း ဘယ်ခြောက်ထောက်နဲ့ ဂိုးပိုက်ထဲကို ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ကန်သွင်းတတ်တဲ့သူပေါ့…
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆု ( Ballon d’Or) ဆုကို အများဆုံးနဲ့ ခြောက်ကြိမ်အထိ ရရှိထားတဲ့ ဘာစီလိုနာရဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမားကြီး လီယွန်နယ်မက်ဆီရဲ့ ဟိုး ကလေးဘဝကနေ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်အထိ…
ငယ်ဘဝအခက်အခဲပေါင်းများစွာကိုဖြတ်သန်းပုံတွေ ..သူ့ရဲ့ပါရမီတွေ..ဘာစီလိုနာရဲ့ အရေးပါတဲ့ဂိုးတွေကို တဒိုင်းဒိုင်းသွင်းပုံတွေ
အယိမ်းအနွဲ့ပေါင်းများစွာနဲ့ ပြိုင်ဘက်လုတဲ့ဘောလုံးသမားတွေကိုအရူးလုပ်ခဲ့ပုံတွေက အစ ရိုက်ကူးပြထားတာပါ…
ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေတင်မကပဲ အားကစားကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေပါ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးမို့ ကြည့်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ,,,
Death shotနဲ့ Harley Quinnကြီးပါတဲ့
ဒါကတော့ IMD RATING 6.6ရထားတဲ့ Will Smithရဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတခုပါ
ဒါပေမယ့် Jessမသိတာက Nickyဟာ ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်သူ သူခိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ
Nickyရဲ့ ပညာပေးမုှကိုခံရပြီး Jessဟာ Nickyတို့ရဲ့အဖွဲ့ထဲဝင်ကာ သူခိုးတို့တတ်အပ်တဲ့ပညာကိုသင်ကြားပါတော့တယ်
ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရတဲ့အလုပ်ကြီးတခု ပြီးချိန်မှာNickyက Jessကိုပိုက်ဆံတွေပေးပြီး ရုတ်တရက်ထားခဲ့ပါတယ်
ဒါပေမယ့် Nickyသတိမထားမိလိုက်တာက Jessကို Nickyတကယ်ချစ်မိသွားတာပါပဲ
နောက်ငါးနှစ်အကြာမှာ ပြိုင်ကားသူဌေးတယောက်ဆီက နည်းပညာကို ခိုးယူဖို့Nickyအစီအစဉ်တွေချပြီး ကြိုးစားနေချိန်မှာ မမျှော်လင့်ပဲ
Jessဟာ ပြိုင်ကားသူဌေးနဲ့တွဲနေတာကို Nickyတွေ့လိုက်ရတော့….
ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကား က တော့ The Priests ဆို တဲ့ Korea ရုပ် ရှင် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ ဇာတ်ကား က horror ဖြစ် ပြီး သရဲ ထုတ် တဲ့ အကြောင်း exorcism ကို အဓိကထားပြီး ရိုက် ထား ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
IDMB မှာ Rating 6.4 ထိရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။အထက် တန်း ကျောင်း သူ လေး Young-Sin ဟာည ဘက် အိမ်အပြန် လမ်း မှာ ကားတိုက် ခံ ရ ပြီး နောက်
အဖြေရှာ မရ တဲ့ ရော ဂါ ကို ခံ စားနေရပါတယ် ။
ခရစ်ယာန် ဘုန်း တော် ကြီး Kim ဟာ ဆေးရုံ မှာYoung-Sin ကို မြင်ပြီး ကတည်း က Young-Sin
အဖြေရှာ မရ တဲ့ ရော ဂါ ဟာ သာ မန် ရိုးကြ မဟုတ် ဘူး ဆို တာ ပါ ပဲ ။
သူ ယုံ ကြည် တာ က တစုံ တရာ ဆွဲ ကပ် နေ တယ် ဆို တာ ကို ပါ
ဒါကြောင့် သူ ဟာ လူ နာရှင် တွေ ရဲ့ ခွင့် ပြု ချက် နဲ့ သရဲ ထုတ် ချင်း ကို လုပ် ဆောင် ရန်
Korean Catholic Church (ဘုရားကျောင်း ) ကို အကူအညီ
တောင်း ကာ စတင် လုပ် ဆောင် ပါတယ် ။
သရဲ ထုတ် ချင်း လုပ် ဆောင် ရာ မှာ သူကို ကူညီ ပေး မယ့် လက်ထာက် လို တာ ကြောင့် ဘုရားကျောင်း က
deacon ဘုန်းကြီး အလုပ်သင် (sorry ခရစ်ယန် ဘာသာ အခေါ် အဝေါ တွေ မသိတဲ့ အတွက် မှား ရင်sorry ပါ )
ကို လာ ကူ ဖို့ အကူ အညီ တောင်း ခံ ပါ တယ် ။
သို့ သော် exorcism သရဲ ထုတ် ချင်း လုပ် ကိုင် နေ စဉ် မှာ ပဲ ဘုန်းကြီး အလုပ်သင် များ ဟာ
ကြောက် လန့် ပြီး ပြေး ကြ တော့ တယ် ဒါကြောင့် ဘုန်း တော် ကြီး Kim အခက် ကြုံ ရ တာ ပေါ့ ။
ဒီ လို နဲ့ ဘုန်းကြီး အလုပ်သင် Choi ကူညီ ရမယ့် အလှည့် ရောက် လာ ပါတော့
Choi ဟာ အလုပ်သင် ထဲ မှာ လုပ် သက် အငယ် ဆုံး နဲ့ ဘာ ကို မှာ အလေးအနက် မထား တဲ့ လူ မျိုးပါ
ဒါကြောင့် ဘုန်း တော် ကြီး Kim စတင် ခေါင်း ကိုက် ရ ပါတော့ တယ် ။
လူ နာ ရဲ့ အခြေ အနေ က အချိန် ထက် မဆွဲ သင့် တော့ တာ ရော လက် ထောက် က လုပ် သက် အငယ် ဆုံး နဲ့
ဘာ ကို မှာ အလေးအနက် မထား တာ ရော စ တဲ့ ပြသာနာ တွေ ကို ဘယ် လို ဖြေ ရှင်း မလဲ ။
အထက် တန်း ကျောင်း သူ လေး Young-Sin အသက် ကို ကော ကယ် နိုင် မလား ။
exorcism သရဲ ထုတ် ချင်း ကို ဘယ်လို လုပ် မလဲ ။
demon က ကောင် မလေး ကို ဘယ် လို ပူး သွား လည်း ဆို တာ တွေ ကိုတော့ ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်း ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး
PS: ခရစ်ယာန်အခေါ်အဝေါ်တွေ သိပ်မသိတာကြောင့် ဘာသာပြန်တာလွဲနေမှုများ ရှိခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်
Synopsis A cryptic message from Bond’s past sends him onatrail to uncoverasinister organization. While M battles political forces to keep the secret service alive, Bond peels back the layers of deceit to reveal the terrible truth behind SPECTRE.
စုံထောက် Choi Chang-Sik ဟာ သမ္မတကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်တဲ့ ထူးချွန်ဆုကိုရရှိထားပြီး
ဌာနမှာ ရာထူးတိုးဖို့ အလားအလာရှိ‌နေသူတစ်ယောက်ပါ။
ကားမောင်းသမားယောင်ဆောင်ထားတဲ့ လုပ်ကြံသူ၏တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
နှစ်ယောက်သား ရုန်းရင်းဆန်ခတ်နဲ့ တိုက်ခိုက်နေကြရင်း
Choi Chang- Sik မှ မတော်တဆ လက်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ရာထူးတိုးဖို့အကြောင်းရှိနေတာကြောင့် အမှုကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်
နောက်နေ့မနက်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဂန်းနမ်ရဲစခန်းရှေ့မှာ
ထောင်ချောက်မိသွားမှန်း သိလိုက်ရတဲ့ Choi Chang-Sik တစ်ယောက်
မိမိကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်ရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အဖြစ်မှန်ကို
လွန်ခဲ့တဲ့၁၅နှစ်က အဖြစ်မှန်တွေပဲ ပြန်ရှာတွေ့သွားမလားဆိုတာကတော့
The Chronicles Of Evil မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ။
မင်းသားPark Seo Joon ပါဝင်တဲ့အပြင်
စုံထောက်အက်ရှင်မင်းသားကြီး Ma Dong Seok ကပါ ပါဝင်အားဖြည့်ထားပြီး
Swung (2015) ================== မင်္ဂလာပါခင်ဗျ ဒီတစ်ခါ 18+ကားလေးပါ…. ဟုတ်ပါတယ် ၁၈အပေါင်းဆိုပေမယ့် HD တွေလိုပလိန်းအပေါင်းမဟုတ်ပဲ ထုံစံအတိုင်း ပညာပေး အပေါင်းကားလေးမို့ ဇာတ်လမ်းလေးကအသက်ပါ nude အခန်းတွေကတော့ စိတ်လျှော့ထားပါ….. များများစားစားမဟုတ်ပေမယ့် Swingers လို့်ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့လိုက် လိင်ဆက်ဆံသူတွေအကြောင်းရိုက်ထားတာမို့ ကြမ်းပါတယ် ကဲကဲ ၁၈နှစ်မပြည့်သေးရင် ကျော်သွားပါလို့အနူးအညွတ်ပန့်ကြားရင်း …. ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသားကွီးတွေကလည်း ကျော်ပြီးပဲကြည့်မနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးလည်းခံစားပါဦးလို့ ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ရွင်လန်းပါစေခင်ဗျာ
IMDb Rating (7.3/10) နဲ့ Rotten Tomatoes (86%) ထိရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။
တောင်ကိုရီးယားမှာ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့က ရုံတင်ခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၁၅ ရက်ထိ လက်မှတ်စောင် ရေ ၁၀ သန်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်ပွဲခံဇာတ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ဂျပန်ခေတ်နောက်ခံဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များဆီက ဂျပန်လက်အောက်ခံဖြစ်နေတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားတော်လှန်ရေးသမားတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း မန်ချူးရီးယားမှာ အခြေစိုက်ပြီး ပုန်းခိုနေခဲ့ရပါတယ်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဂျပန်လက်အောက်ကို ကျရောက်ခဲ့စဉ် အပြစ်မဲ့တဲ့ ပြည်သူများစွာဟာ ရက်စက်စွာ အစုလိုက် အပြုံလိုက်အသတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ဒီသတ်ဖြတ်မှုမှာ ခေါင်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးနဲ့ ဂျပန် အလိုတော်ရိ တစ်ယောက်ကို လုပ်ကြံဖို့ စီစဉ်ကြတယ်။
ဖောက်ခွဲရေးသမား ဟွမ်ဒေါဆန်းတို့ ၃ ယောက်ပါဝင်တဲ့ လုပ်ကြံသူအဖွဲ့ ဖွဲ့ခဲ့ပြီးနောက်…
သစ္စာဖောက်တစ်ယောက်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ် ကျရှုံးသွားတဲ့အခါ…
ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားထဲမှာ ဆက်လက်ခံစား ကြည့်ရှူ့ကြပါ ။
ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့ Lee Jung-Jae နဲ့ Jun Ji-Hyun တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ဂျောင်ဆူနမ်လို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့
အဲ့ဒီမှာပဲ သူမဘ၀အကြောင်းကို စတင်ပြောပြခဲ့ပါတယ်
စက်ရုံတစ်ခုမှာပဲ အလုပ်၀င်ရမလားဆိုပြီး ဒွိဟဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်
ကံဆိုးမှုက အဲ့ဒီမှာတင် ရပ်မနေခဲ့ပါဘူး
အိမ်အတွက် ပိုက်ဆံရှာဖို့က သူမတာ၀န် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် အလုပ်ပေါင်းစုံ မညည်းမညူဘဲ လုပ်ခဲ့တယ်.
တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့နေတဲ့ မြေနေရာကို စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုနဲ့
သေကြောင်းကြံပြီး ကိုမာဖြစ်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းသည်အတွက် ပိုက်ဆံလိုနေတဲ့ သူမ..
စီမံကိန်းရဲ့ကန်ထရိုက်ကခိုင်းတဲ့ အလုပ်ကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရင်း
ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံး အချိတ်အဆက် မိမိနဲ့
အားလပ်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်ပေးကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ခုပါ
Oh My Ghost5အခြောက်မကြီးတွေနဲ့ ပန်ကိတ်သရဲမတို့ရဲ့ ဟာသသရဲကားဖြစ်ပြီး ဒီတခေါက်မှာတော့ စာသင်ကျောင်းရဲ့ဆရာကန်တော့ပွဲကိုသွားမိရာမှ ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့သေဆုံးသွားတဲ့ ညီမဖြစ်သူ အကူအညီတောင်းခြင်းကြောင့် အမှုအခင်းဆိုင်ရာ အမွေဆိုင်ပြသနာအရှုပ်ထဲဝင်ပါမိကြသောအခါ….
အခြောက်မကြီးတို့ သရဲမလေးကို အကူအညီပေးနိုင်ကြပါ့မလား အရှုပ်တွေကိုရော ရှင်းနိုင်ကြပါ့မလားဆိုတာကို ဟာသတွေနဲ့ပါးစပ်မပိတ်နိုင်အောင်ရယ်ပြီး ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ( ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ Ladyboy လေးရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုလဲ ရှုစားလိုက်ကြပါဦး)
ကွင်း ဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဟာ
သူမ ရဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ နှင့် အဆက်အသွယ်ရရှိနိုင်ဖို့
ပရလောက ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်သူ ပညာရှင် အဲလိစ် ထံ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီ အချိန်မှာ အဲလိစ် ဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဆုံးပါးပြီးခါစ အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်
အဲ့ဒီနောက် ကွင်းဟာ စာအုပ်တစ်ချို့ကို ဖတ်ပြီး သူမဘာသာ
ဝိဉာဉ် ဆင့်ခေါ်တဲ့ အရာတွေကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်…
တကယ်လဲ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် ရောက်ရှိလာခဲ့တာကတော့
သူမ ရဲ့ အမေမဟုတ်ပဲ အလွန်အင်မတန် ဆိုးဝါးတဲ့ လူသတ်ကောင်
မကောင်းဆိုးဝါး အကြီးစား တစ်ကောင် ဖြစ်နေခဲ့သောအခါ….
စုံထောက်မင်းသားကြီး Hwanh Jung Minရဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားလေးဟာဆိုရင် IMDb rating 7အထိရခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ အာဏာရှိပြီး ချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာ ငွေကြေးခဝါချမှု
မူးယစ်ရမ်းကားမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပေမယ့် ငွေကြေးနဲ့အရာရာကို လုပ်ယူလို့ရကြပါတယ်။
ဆန်ဂျင်းလုပ်ငန်းစုရဲ့သားဖြစ်သူ ဒါရိုက်တာချိုဟာလည်း စိတ်ထင်ရာရိုင်းစိုင်းလေ့ရှိပြီး
တစ်နေ့မှာတော့ ဆိုးလ်မြို့နယ်စုံထောက်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူဟာ ကုမ္ပဏီနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့
အဲ့နောက်မှာတော့ စုံထောက်ကလည်း လိုက်လံစုံစမ်းနေရင်းက
ဒါရိုက်တာချိုရဲ့ လူသတ်မှုကိုကျူးလွန်မှုအပါအဝင် ငွေကြေးခဝါချမှု မူးယစ်ရမ်းကားမှု
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူငယ်တွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေပါ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အာဏာရှိတဲ့သူက အာဏာကိုအသုံးပြုပြီးတားဆီးပုံ အမှန်တရားကိုနှစ်သက်တဲ့စုံထောက်ကလည်း
အခက်အခဲတွေကြားထဲက ဘယ်လိုမျိုးဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာကိုပါ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်
Beatrice Prior ဟာ သူမရဲ့ အတွင်းစိတ်နတ်ဆိုးတွေကျေနပ်စေဖို့အစွမ်းရှိတဲ့ပူးပေါင်းမှု တစ်ခုကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီပူးပေါင်းမှုက သူမဘက်ကအခြားလူတွေရဲ့ အကူညီကိုယူပြီးသူမရဲ့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်ဆုတ်ဖြဲပစ်ဖို့ခြိမ်းခြောက်နေခြင်းကြောင့်သူမတိုက်ခိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
လိုင်းဖြတ် သို့တည်းမဟုတ် ကျရှုံးချိန်နေရာတစ်ခု…..
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Point Break ကရော . ဘယ်အချိန်.. ဘယ်နေရာမှာပါလဲ?
ဒီဇာတ်လမ်းထဲက ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ Point Break ကတော့….
ဇာတ်လမ်းကတော့ ဘက်စုံကျွမ်း အားကစားသမားဖြစ်တဲ့
ယူတာ့ရှ်တစ်ယောက် FBI ကို ဝင်ဖြစ်ပုံနဲ့ စတင်ထားပါတယ်။
သူရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ စိတ္တဇဆန်ဆန် လုယက်မှုတွေ
ပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ ယူတာ့ရှ်ဟာ အမှုသွား အမှုလာတွေကို
လေ့လာပြီးတော့ သံသယရှိသူတွေဟာ ဘက်စုံကျွမ်း အားကစားသမားများ
ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့
အိုဇာကီ ၈ ချက် ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ နေပေးရင်
ဘက်စုံကျွမ်းအားကစားသမားများပင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် FBI အထက်တန်းက အဲ့ဒီအယူအဆကို
လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာကတော့ ယူတာ့ရှ်ရဲ့
ဘော့စ် ဟောလ်က လက်ခံပေးလိုက်တာပါပဲ။
အိုဇာကီ ၈ ချက်ထဲကအတိုင်း ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံ့အပြားမှာ
လုပ်ဆောင်သွားတာတွေကို ရင်သက်ရှုမောဖွယ် ကြည့်ရှုခံစားကြရမှာပါ။
စတန့်ပြကွက်တွေ ဖောဖောသီသီ သုံးထားတဲ့ အက်ရှင်ခန်းတွေ
လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား . . .
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂နှစ်ခန့်က ပြသနာများကြောင့် ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ ဂျရက်ဂ်ဆဇ်ဂ် အပန်းဖြေစခန်း (Jurassic Park) ကြီး ပြန်ဖွင့်ပြီးတဲ့နောက် ပန်းခြံရဲ့အုပ်ချုပ်သူမန်နေဂျာ ကလဲ (Claire) ရဲ့ တူနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဇက်ဂ် (Zach) နဲ့ ဂရေး (Gray) တို့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အဒေါ်ရှိရာ ဂျရက်ဂ်ဆဇ်ဂ်ကို သွားလည်ကြပါတယ်။ အလုပ်များလွန်းတဲ့ အဒေါ်က တူနှစ်ယောက်ကို လမ်းညွှန်လုပ်ဖို့ရာ သူမရဲ့လက်ထောက် ဇာရာ (Zara) ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပန်းြ581ဲ%1-E%8 %;B$@C5E5%1%Ee88%15E184!80%Bအ%O181eG1’B#%8ီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က ဇာရာ့ကို မျက်ခြေဖြတ်ပြီး နှစ်ယောက်သား လေ ျှာက်လည်ကြပါတော့တယ်။